Uma aphakeme ama-hormone prolactin, le siyabhubha umjikelezo wokuya esikhathini futhi ibhalansi hormone, futhi kukhona ukungabi nenzalo noma izinkinga ethwele ingane. Ngakho-ke, abesifazane kudingeka sithole ezingeni layo egazini phakathi ukuhlela sokukhulelwa.
Prolactin kuveza indlala pituitary - ndlala endocrine elise ubuchopho. Hypothalamus elawula le nqubo. amazinga ama-hormone kakhulu sensitive yizici zangaphandle ukuphi. Ngakho, prolactin okusezingeni eliphezulu kungenzeka ngenxa yezizathu ezilandelayo:
isifo Addison sika ;
kwesikhathi kwangemva kokubeletha;
isikhala esikhona sokulondoloza;
ukulimala nokuhlinzwa esifubeni.
Ngezinye izikhathi ezahlukene umjikelezo we ezingeni i-hormone egazini kuhluka 6 kuya ku-28 ng / ml. Ukuze uthole imiphumela ezinokwethenjelwa ayikwazi emva ukuhlaziya ubuthongo noma izinqubo. I uketshezi of prolactin kwenzeka pulsed, imvamisa isigaba engaphansi lomjikelezo. Kukhona futhi iyehla iyenyuka yansuku zonke level yayo, isibonelo, ngemva ukuvusa i-hormone lokuhlushwa kulencane. Ngemva ngilale uketshezi yayo uyanda futhi uya ngokuya ikhula ngephupho.
Okukodwa ezigulini eziye aphakeme prolactin, wathola pituitary adenoma. Uma usayizi waso likhulu, ezingeni hormone ezingaphezu kuka-100 ng / ml. amazinga Lower kungaba microadenomas emasayizini encane, hhayi ukutholwa-X-ray.
Indlela kakhulu ulwazi ngenxa sitholakele pituitary izimila - a-MRI. Kuyadingeka ukuba kudlule nokuhlela ingane, uma kukhona izinsolo i adenoma, njengoba isimila esikhulu kungase kube nomthelela ukuxakeka.
Ubukhulu microadenomas pituitary musa idlule 1 cm. Zikhula kancane kakhulu futhi ngokuvamile kungavamile ukuba ingozi. Macroadenomas ububanzi mkhulu kuka-1 cm. Basuke ephelezelwa ubuhlungu bekhanda, izinguquko emasimini ezibukwayo futhi ukulahlekelwa ngesinye ephelele ke. Phezu ukuthola macroadenoma kuyinto kokubonisana ledzingekako udokotela ohlinza izinzwa. Wenza isinqumo mayelana ukuhlinzwa. Phakathi nenkathi yokukhulelwa microadenomas ngokuvamile musa ukushintsha, kodwa izimila usayizi esikhulu u-20% amacala ezikhulayo.
Prolactin nayo njalo kwaphakanyiswa ukwehluleka kwezinso (zezifo ezingelapheki). Lapho izinso ukufakelwa i ukuzinza of uketshezi yayo.
Uma prolactin liphakeme, umgomo ekwelapheni okulandelayo:
kuzonciphisa izinga layo;
ukunqinda isimila, uma ikhona.
Omunye izidakamizwa esetshenziswa wehlise hormone - kuyinto Parlodel, okuyinto agonist Dopamine. It kuvimbela uketshezi of prolactin by inkanuko zemizwa ingqondo. Dose incike kobukhulu kanye nohlobo isifo. Ngemva ukwethulwa bromocriptine umjikelezo kubuyiselwa emva isilinganiso amasonto 7. Nakuba ezinye iziguli kwenzeka ezinsukwini ezimbalwa.
Bromocriptine kujwayele ukuthatha izikhathi eziningana ngosuku. umthamo kungase kukhule uma kunesidingo. Ukwelashwa okufanele kuhlale imijikelezo eziningana ngemva kokubuyiselwa zokwehlukaniswa ukuvimbela Ukuphinda. imiphumela emibi bromocriptine:
Ukuze wandise prolactin kungabangela i-hypothyroidism. Ukuthola Gomonov kulokhu kuholela ukuzinza of ezingeni layo.
Izimpawu I-prolactin ukuhlaziya okulandelayo:
potency ephansi futhi libido;
eyindilinga webele ubuhlungu.
Ngakho, prolactin yanda, ezimweni eziningi ngenxa adenomas pituitary. Ngaphezu kwalokho, imbangela evamile lokuhlushwa yayo high-hypothyroidism. Ubuningi anda prolactin kuholela ukuphazamiseka kokuya esikhathini kanye ukungabikho nge-ovulation, ngakho ukukhulelwa abantwana kuba cishe kungenakwenzeka. Ukwelashwa siqukethe zehlise izinga layo, ukuqedwa izimbangela isifo futhi umjikelezo yokutakula.
Hypospadias - kuyini? Izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Kanjani ukuze elashwe ecucuza ekhaya futhi ekhemisi zabantu izindawo
Bowl Klojber-X-ray ukuhlola ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu
Wide System Spectrum likaSomlomo ukuze PC: amamodeli engcono, ukubuyekeza kanye impendulo
Renault Kadjar: incazelo, imininingwane, izithombe
Kungani baseMelika wesabe Russian? Futhi uma besaba, ngempela?
Electric isixubho Oral B - isiqinisekiso impilo
Bazilik.Vyraschivanie imbewu ku podonnike ekhaya
Isithombe Apollinaris Vasnetsov: incazelo emfushane
Kuyini Citadel? "Citadel" operation lempi.
Kungani crunches ahlangene omdala noma ingane? Kungani crunches nesiphanga obuhlungu, amadolo noma hip?